Home Wararka Rooble oo sheegay cidda uu kala xisaabtamayo xulista Aqalka Sare ee J/Land.
Rooble oo sheegay cidda uu kala xisaabtamayo xulista Aqalka Sare ee J/Land.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maalmo uu joogay Kismaayo kadib Maanta u ambabaxay Magaalada Garbahaarey ee Gobolka Gedo, halkaas oo ay yaalaan qaar ka tirsan kuraasta aqalka hoose ee baarlamanka Soomaaliya.
Rooble ayaa madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe oo ka sagootiyey garoonka Diyaaradaha ee Kismaayo kula dardaarmay inuu guto waajibka ka saaran doorashada kuraasta labada Aqal ee taalo Jubbaland.
Rooble ayaa sheegay inuu Maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiye Axmed Madoobe kala xisaabtami doono doorashada kuraasta taalo Kismaayo iyo Garbaharey.
“Jubbaland waxa aan kala xisaabtamayaa Doorashooyinka Kismaayo iyo Garbahaarey, Madaxweyne waa in aad gudataa mas’uuliyadda kaa saaran doorashada labadaas degmo,” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Rooble ayaa tilmaamay in safarkiisa Kismaayo uu soo gaba-gabeeyay, qorshaha labaad waa Degmada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo si uu ula kulmo qaybaha kala duwan ee Maamulka & Bulshada Magaaladaas.
Rooble oo ay wehlinayaan Guddigii uu u magacaabay arrimaha Gobolka Gedo ayaa waxaa ay degmada Garbahaareey uu kula kulmi doonaa Odayaasha Dhaqanka iyo mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Gedo si xal looga gaaro arrinta Gobolka Gedo oo ay isku hayaan dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Jubbaland.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha oo hadlay ayaa sheegay in dhamaan uu booqan doono xarumaha loo asteeyay inay ka dhacaan doorashooyinka, sida: Boosaaso, Garoowe, Dhuusamareeb, Gaalkacyo, Baraawe, Baydhabo, Jowhar iyo Beledweyne.